Farshaxanka Guud Inta badan deegaannada beeluhu waxay ku wasakhoobaan is-dhexgalka bulshada iyo shakhsiyadeed ee deggeneyaashooda taasoo keenta fowdo la arki karo oo muuqata oo ka dhacda deegaanka. Saamaynta miyir-la’aanta ee dhibaatadan ayaa ah in dadka degani ay dib ugu noqdaan deganaan la'aan. Calool-xaarkan caadiyan iyo baaskiilku wuxuu saameeyaa jirka, maskaxda iyo nafta. Naqshadeynta sawirada ayaa tilmaamaysa, duugoobaysa, nadiifinaysa, oo xoojinaysa "chi" togan oo boos ah, iyada oo diiradda la saarayo natiijooyinka wanaagsan iyo nabadda. Isbadal khiyaamo ku ah deegaankooda, dadweynaha waxaa loo hagta inay isu dheelitiraan xaqiiqadooda gudaha iyo tan dibedda.
Nashqadeynta Naqshadaynta siyaadada ah waxay kuxirantahay fikradda boqoradda iyo chessboard. Iyada oo labada midab ee madow iyo dahabka, qaabeynta ay tahay in la gudbiyo dareenka heerka sare iyo dib u qaabaynta muuqaalka muuqaalka. Marka lagu daro khadadka biraha iyo dahabka ee loo adeegsaday sheyga laftiisa, sheyga goobta waxaa loo dhisay in lagu dejiyo aragtida dagaalka ee chess-ka, waxaanan u adeegsanaa iskuduwaha nalalka marxaladda si loo abuuro qiiq iyo iftiinka dagaalka.
Farshaxan Xi'an wuxuu ku yaalaa meesha laga bilaabo Wadada Xariirka Weyn. Habka cilmi baarista hal abuurka ee farshaxanka, waxay isku daraan dabeecadda casriga ah ee astaanta hudheelka Xi'an W, taariikhda gaarka ah ee Xi'an iyo sheekooyinka farshaxanimo ee Tang Dynasty. Sawirro isku dhafan oo ay la socdaan farshaxanimada qurxinta ayaa noqday muujinta farshaxanka ee hudheelka W oo saameyn weyn ku yeeshay.
Dib-U-Habeynta Dekada Soo jeedinta ayaa adeegsata seddex fikradood oo dib loogu dhisayo Nidaamka CI ee Dekada Yong-An Kalluumeysiga. Midka hore waa astaan cusub oo la abuuray iyada oo la adeegsanayo qalab muuqaal gaar ah laga soo qaatay astaamaha dhaqanka ee bulshada Hakka. Tallaabada xigta waa dib-u-kobcinta khibradda madaddaalada, ka dibna la abuuro laba jilaa oo mascot ah oo matalaya una oggolaanaya inay u soo muuqdaan jiidasho cusub oo loogu talagalay ku hagidda dalxiisayaasha dekedda. Ugu dambeyntiina, ugu yaraan sagaal meelood oo gudaha ah, oo ay ku jiraan hawlo madadaalo iyo cunno cunno macaan.
Naqshadeynta Bandhigku Sanadka 2019, xaflad muuqaal ah oo xariijimo leh, midabbo kala jaad ah, iyo dhalaalaya ayaa dhalisay Taipei. Waxay ahayd Bandhig Faneedka Farshaxanka oo ay soo agaasimeen FunDesign.tv iyo Tape that Collective. Mashruucyo kala duwan oo leh fikrado iyo farsamooyin aan caadi ahayn ayaa lagu soo bandhigay 8 xarig farshaxan oo farshaxanno ah waxaana la soo bandhigay in ka badan 40 sawir oo sawir gacmeed ah, oo ay weheliso fiidiyowyo howsha farshaxan yaashadii hore. Waxay kaloo ku dareen dhawaaqyo iftiin leh iyo iftiin si ay uga dhigaan munaasabadda mid farshaxanimo farshaxan ah iyo agab ay ku dabaqeen oo ay ka mid yihiin xargaha maro, cajalado xargaha, xargaha baakadaha, cajalado balaastig ah, iyo foornooyin.
Salon Timaha Qaadashada nuxurka sawirka botanical, jardiinada cirka ayaa loo abuuray dhammaan safarka, isla markiiba waxay soo dhoweynayaan martida si ay hoos ugu socdaan, iyaga oo ka dhaqaaqay dadkii badnaa, kuna soo dhoweynaya marinka laga soo galo. Adigoo u sii jeeda meesha bannaan, qaabeynta cidhiidhi ah wuxuu ku fidaa xagga sare oo leh taabashooyin dahab ah oo faahfaahsan. Astaamaha Botanic-ka wali si firfircoon ayaa loogu muujinayaa qolka oo dhan, iyaga oo beddelaya dhawaqa dhawaqa ka imanaya ee ka imanaya waddooyinka, halkanna wuxuu noqonayaa beer qarsoodi ah.
Farshaxanka Guud Nashqadeynta Farshaxan Dib-U-Habeynta Dekada Naqshadeynta Bandhigku Salon Timaha